Inter Milan Vs Real Madrid: Wax Walba Oo Aad Uga Baahantahay Kulanka Adag Ee Ka Dhici Doona San Siro —
Home » Inter Milan Vs Real Madrid: Wax Walba Oo Aad Uga Baahantahay Kulanka Adag Ee Ka Dhici Doona San Siro
Inter Milan Vs Real Madrid: Wax Walba Oo Aad Uga Baahantahay Kulanka Adag Ee Ka Dhici Doona San Siro
Kooxda Inter Milan ayaa marti galin doonta Real Madrid kulan adag oo ka tirsan wareega Group-yada champions League kana dhici doona aroonka San Siro.
Kooxda Real Madrid ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo doonaya in ay guul ku bilowdaan tartanka champions League iyaga oo doonaya in ay garaacaan Inter Milan.
Dhanka kale Inter Milan oo wareega Group-yada kaga hadhay champions League xilli ciyaareedkii hore ayaa doonaysa in ay arintaas iska ilaaliso mar kale in ay ku dhacdo xilli ciyaareedkan.
Kulanka Inter Milan Vs Real Madrid
Kulankan ayaa noqon doona markii 2-aad oo xidhiidh ah champions league oo ay ku kulmaan kooxaha Inter Milan iyo Real Madrid iyaga oo isku Group ahaa xilli ciyaareedkii hore iyada oo ay Real badisay labadii kulanba.
Inter Milan ayaa laga badiyay 4 ka mid ah 5-tii kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaartay Real Madrid tartamada yurub waana guuldarooyinka ugu badan ee ay kala kulantay kooxda Los Blancos.
Guushii ugu dambaysay ee ay Inter Milan ka gaadho koox La Liga ah waxa ay ahayd 2010 markaas oo ay champions league 3/1 ku garaaceen kooxda Barcelona iyaga oo xilli ciyaareedkaas ku guulaystay koobka.
Real Madrid ayaa kaliya badisay hal mid ka mid ah 8-dii kulan ee ugu dambeeyay ee ay marti u ahayd Inter Milan tartamada champions league si kasta ha ahaatee guushaas ayaa timid bishii November 2020.